"Phumula endaweni enokuthula enokubukeka kwasemaphandleni" - I-Airbnb
"Phumula endaweni enokuthula enokubukeka kwasemaphandleni"
Brightwater, Tasman, i-New Zealand
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Vanessa
Indlwana itholakala epulazini elincane eduze ne-Nelson. Uma ufuna indawo yokuhlala ehlanzekile, enethezekile, ethulile kodwa eseseduze nempucuko, lokhu kungokwakho kuphela. Yindawo ekahle kakhulu yokuphumula nokukhululeka. Endaweni yasemaphandleni enokuzola, jabulela ingilazi yewayini lendawo emphemeni nokubukeka okungaphazamiseki kwesibhakabhaka sasebusuku. Indlwana inakho konke okudingayo ukuze uphumule kahle.
Sinenqwaba yokupaka etholakalayo ngakho ukupaka isikebhe, i-trailer noma ngisho nebhokisi lehhashi akuyona inkinga.
I-deck iyindawo enhle yokuphumula ngekhofi noma iwayini futhi ufunde incwadi noma uqaphele nje indawo ezungezile yezwe.
Indawo yokubhukuda endlini enkulu nayo iyatholakala ngamalungiselelo.
Indlwana inendawo yangaphandle evikelwe, enezihlalo ezifanelekela ukupheka ku-BBQ.
Kukhona ukufinyelela okulula endaweni yokungena yesakhiwo nge-ramp.
Uma ungathanda ukuhlola isifunda esihle se-Tasman akukude ukuxhumanisa ne-Great Ladha Bike Trail noma i-Wairoa Mountain bike trail futhi kukhona amabhishi, imifula, amachibi nezintaba konke ebangeni elilula lokushayela. Indlwana ilungele amabhizinisi endawo ngalezo zinto ezidingekayo zomzuzu wokugcina noma uma uzizwa njenge-café cuppa noma i-pint sine-café yasendaweni ne-bar. Izinketho zokudla ezikude ngemizuzu nje engu- futhi kunezinhlobonhlobo zezindawo zokudlela e-Wakefield eseduzane noma e-Richmond esingayitusa.
Mina no-Chris sihlala endlini ngakho asikho kude uma udinga noma yiluphi usizo. Siyajabula ukukunikeza noma yikuphi ukusikisela kwezindawo ongazibona nezinto ongazenza esifundeni sethu esihle noma kunjalo sizokushiya ungaphendulwanga phakathi nesikhathi sokuhlala kwakho.
Mina no-Chris sihlala endlini ngakho asikho kude uma udinga noma yiluphi usizo. Siyajabula ukukunikeza noma yikuphi ukusikisela kwezindawo ongazibona nezinto ongazenza esifundeni…
Hlola ezinye izinketho ezise- Brightwater namaphethelo